Showing posts with label IT-news. Show all posts
8/10/2014 08:38:00 AM IT-news
INternet Journal အပြည့်အစုံသို့ »
7/31/2014 07:13:00 PM IT-news
အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ Facebook အသုံးပြုသူတွေဟာ တစ်နေ့ကို ပျမ်းမျှ မိနစ် ၄၀ သာ Facebook ကို အသုံးပြုဟုဆို
7/27/2014 05:17:00 PM IT-news
အမေရိကန်နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှာရှိနေကြတဲ့ Facebook အသုံးပြုသူတွေဟာ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၄၀ ခန့် Facebook ကို အသုံးပြုကြောင်း သိရသည်။ မက်ဇူကာဘက် က Facebook ရဲ့ ဒုတိယ ၄ လပတ်အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားရာမှာ ” အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ Facebook ပေါ်က သူတွေဟာ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၄၀ လောက်ပဲ မိမိတို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုကြတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ CDC ရဲ့ အကြံပြုချက်များအရ အမေရိကန်လူမျိုးတွေဟာ တစ်နေ့ကို ၂၂ မီနစ်လောက် လေးကျင့်ခန်းလုပ်ကြပြီး ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်ဝတယ်လို့ ဆိုသည်။
ဇူကာဘက်က ပြောကြားရာမှာ မိနစ် ၄၀ အသုံးပြုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ တကယ်တမ်း မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ကနေ အသုံးပြုတာက Facebook အကောင့် တစ်ခုအတွက် ၅ မီနစ်ပဲ ရှိတယ်လို့ ဆိုသည်။ ဒါကြောင့် Facebook ရဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ ဇူကာဘက်ကပြောတာကတော့ အမေရိကန်က သူတွေဟာ ပျမ်းမျှ တစ်နေ့ကို ၉ နာရီလောက်ရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာတွေ ဖြစ်တဲ့ တီဗီ ၊ ဖုန်း နှင့် ကွန်ပျူတာတွေအပေါ်မှာ သုံးစွဲတယ်လို့ ဆိုသည်။ ဒါဟာ လူတွေကို ဝေမျှဖို့အတွက် အကြီးမားဆုံး တိုးတက်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ဆိုသည်။ အမေရိကန်နှင့် ကနေဒါနိုင်ငံ နှစ်ခုပေါင်းမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေထဲက ၂၄ မီလီယံဟာ Facebook ကို အသုံးပြုနေကြကြောင်း သိရသည်။
Post များကို bookmark များအဖြစ် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မည့် Save feature သစ်ကို Facebook မိတ်ဆက်
7/22/2014 02:07:00 PM IT-news
Facebook သုံးစွဲသူများသည် အချိန်မရသောကြောင့် မကြည့်ရှုနိုင်သော post များကို Save ဟုခေါ်သည့် feature သစ်ဖြင့် အသုံးပြုကာ အားလပ်သည့်အချိန်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားနိုင်တော့မည် ဖြစ်သည်။
Facebook သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ timeline ပေါ်တွင် story ၏ ညာဘက်ထိပ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် save ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Save စာရင်းတွင် places, movies, TV နှင့် အခြားသော အရာများ ပါဝင်ကြောင်း Facebook က ပြောကြားခဲ့သည်။
သုံးစွဲသူများသည် ၎င်းတို့၏ saved item များကို စမတ်ဖုန်း သို့မဟုတ် tablet ပေါ်ရှိ “more” tab အောက်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းကို ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Web browser ဖြင့် အသုံးပြုရာတွင်လည်း တွေ့မြင်နိုင်သည်။
Save feature သစ်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လူမှုရေးကွန်ရက်၏ စိတ်ဝင်စားစရာ အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါ Facebook ၏ အပြောင်းအလဲသည် Instapaper နှင့် Pocket ကဲ့သို့သော အခြားဝန်ဆောင်မှုများကို ယှဉ်ပြိုင်ရန် ပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ Save feature သစ်ကို လာမည့် ရက်အနည်းငယ်အတွင်း iOS, Android နှင့် Web သုံးစွဲသူများထံ အသုံးပြုခွင့်ပေးမည်ဟု Facebook က ပြောကြားခဲ့သည်။
TechSpace Journal အပြည့်အစုံသို့ »
7/14/2014 08:27:00 PM IT-news
အချင်းဝက် ၃ စင်တီမီတာအထိ လိပ်ထားနိုင်မည့် TV panel ကို LG Display မိတ်ဆက်
7/13/2014 08:51:00 AM IT-news
တောင်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီ LG Display သည် သတင်းစာတစ်စောင်ကဲ့သို့ လိပ်ထားနိုင်မည့် ၁၈ လက်မ flexible TV panel သစ်တစ်မျိုးနှင့် ထွင်းဖောက်မြင်တွေ့နိုင်သည့် ၁၈ လက်မ OLED pnael တစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ နည်းပညာ အသုံးပြုထားသည့် တယ်လီဗွီးရှင်းများကို နေအိမ်နှင့် ရုံးနံရံများတွင် အလွယ်တကူ ဖုံးကွယ်ထားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
LG ၏ အဆိုအရ flexible panel သည် 1200x810 high-definition resolution ဖြင့် ဖော်ပြပေးနိုင်ပြီး display ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲ အချင်းဝက် ၃ စင်တီမီတာအထိ လိပ်ထားနိုင်မည်ဟု သိရသည်။
ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်ပြီး ခေါက်ထားနိုင်သည့် display များကို ထုတ်လုပ်နေသည်မှာ LG ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်း မဟုတ်ပေ။ Samsung, Nokia နှင့် Apple တို့သည် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည့် စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet screen များအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း LG ၏ နောက်ဆုံးပေါ် အဆင့်မြင့် panel ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက ဦးဆုံးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ LG သည် G Flex ဟုခေါ်သော flexible စမတ်ဖုန်းတစ်မျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သလို ၇၇ လက်မ flexible OLED TV ကိုလည်း ဇန်နဝါရီလက ကျင်းပခဲ့သော CES ပြပွဲတွင် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Facebook ပေါ်တွင် စူးစမ်းဆင်ခြင်မှု အားနည်းသူ အများအပြား ရှိနေကြောင်း ပေါ်လွင်သွားစေသည့် ဓာတ်ပုံ
7/13/2014 08:50:00 AM IT-news
Social Media သုံးစွဲသူများတွင် စူးစမ်းဆင်ခြင်မှု အားနည်းလွန်းသူ အများအပြား ရှိနေခြင်းကို နာမည်ကျော် ဟောလီးဝုဒ် ဒါရိုက်တာ စတီဖန် စပီးလ်ဘာ့ဂ်၏ ဖြစ်ရပ်က သက်သေခံနေသည်။
စပီးလ်ဘာ့ဂ်သည် (၁၉၉၃)ခုနှစ်က ၎င်းရိုက်ကူးခဲ့သည့် ကမ္ဘာကျော် Jurassic Park ရိုက်ကွင်းနေရာမှ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကြောင့် မည်သည့် အမှားအယွင်းမျှ မရှိဘဲ Facebook ပေါ်တွင် အကြီးအကျယ် ဝေဖန် ရှုတ်ချ ထိုးနှက်မှုများ ခံနေရသည်။
တက္ကဆက်စ်ရှိ Cheerleader မိန်းကလေး တစ်ဦးဖြစ်သော ကန်ဒေါလ်ဂျုံးစ်သည် လှပချောမောသော်လည်း တိရစ္ဆာန်များကို အပျော်သဘော အမဲလိုက်ပြီး ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများကြောင့် Facebook ပေါ်တွင် လူပြောများခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Facebook ပေါ်တွင် နောက်ပြောင်ကျီစယ်သည့် Post များ တင်လေ့ရှိသည့် ဂျေးဘရန်စ်ကွမ်းဘ်က (၁၉၉၃)ခုနှစ်တွင် စပီးလ်ဘာ့ဂ်က ဇာတ်ဝင်ခန်းတွင် အသုံးပြုသည့် ထရိုင်စီယာတော့ပ်စ် ဒိုင်နိုဆော အသေကောင် အရုပ်ကြီးကို နောက်ခံထား ရိုက်ကူးထားသည့် ဓာတ်ပုံကို လွှင့်တင်ခဲ့သည်။
၎င်းက အဆိုပါ ဓာတ်ပုံသည် အကြင်နာမဲ့သူတစ်ဦးက ထရိုင်စီယာတော့ပ်စ် တစ်ကောင်ကို ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ပြီး အမှတ်တရ ရိုက်ကူးထားသော ဓာတ်ပုံဟု ပုံညွှန်းစာ ရေးသားခဲ့သည်။ Jurassic Park ဇာတ်ကားကို ကြည့်ဖူးသူများနှင့် နာမည်ကျော် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာကြီးကို သိရှိသူ အများစုက ဘရန်စ်ကွမ်းဘ်၏ နောက်ပြောင်လိုရုံ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိရှိသော်လည်း Facebook ပေါ်တွင် အဆိုပါ ဓာတ်ပုံကို အမှန်ဟု ထင်သွားသူ အမြောက်အမြား ရှိလာသည်ကို အံ့အားသင့်ဖွယ် တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။
အထူးသဖြင့် ထရိုင်စီယာတော့ပ်စ်များသည် ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသည်မှာ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း မစူးစမ်း၊ မတွေးတောနိုင်ဘဲ ဓာတ်ပုံထဲတွင် ရှိနေသူက ဆဲရေးသူများ၊ ဝေဖန်ရှုတ်ချသူများ၊ ဒေါသတကြီး အပြစ်တင်သူများ အမြောက်အမြား ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
အချို့ကလည်း ယင်းဓာတ်ပုံ ပိုင်ရှင်သည် စပီးလ်ဘာ့ဂ် ဖြစ်နေမှန်း သိသည့်တိုင် ထရိုင်စီယာတော့ပ်စ်မှာ အစစ်အမှန်ဟု ယူဆပြီး ၎င်းရိုက်ကူးသည့် ဇာတ်ကားများကို လုံးဝ အားမပေးတော့ဟု ခြိမ်းခြောက် Commentများ ရေးခဲ့ကြသေးသည်။ Commentရေးသူ တစ်ဦးက စပီးလ်ဘာ့ဂ်အား “လူမဆန်တဲ့ p****ကောင်၊ တိရစ္ဆာန်သတ်တဲ့ကောင်” စသဖြင့် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ဩဘာပေးသွားခဲ့သည်။ ကျန်တစ်ဦးကလည်း “စတီဖန် စပီးလ်ဘာ့ဂ်၊ ရှင့်ကိုကျွန်မ စိတ်ကုန်သွားပြီ။ တိရစ္ဆာန်တွေကို အကြင်အနာမဲ့ သတ်ဖြတ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်ရှင်တွေကို ဘယ်တော့မှ မကြည့်တော့ဘူး”ဟု ဆိုသည်။
အခြားတစ်ဦးကမူ “ဓာတ်ပုံထဲကကောင် ဘယ်သူလဲတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီတိရစ္ဆာန်ကိုတော့ မသတ်သင့်ဘူး”ဟု မှတ်ချက်ပြုထားသေးသည်။ ဇူလိုင် (၁၁)ရက်နေ့ထိ ဘရန်စ်ကွမ်းဘ် လွှင့်တင်ထားသည့် ပုံကို Shareခဲ့သူ (၃၀၀၀၀)ကျော်နှင့် Commentရေးသူ (၅၀၀၀)ကျော်ထိ ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ထရိုင်စီယာတော့ပ်စ်များသည် ကမ္ဘာဦးခေတ်က အသက်ရှင် နေထိုင်ခဲ့သည့် ဒိုင်နိုဆောများအနက် လူသိများသည့် မျိုးစိတ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အသီးအရွက်စား ဒိုင်နိုဆောများသည် ခရီတေးယှက်ယုဂ် ကာလအတွင်းက မြောက်အမေရိက ဒေသတွင် အဓိက ကျင်လည်ကျက်စားခဲ့ပြီး မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်သွားသည်မှာ နှစ်ပေါင်း (၆၈)သန်းမျှ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
Apple ၏ iphone6အား လုံးဝထိခိုက်ကွဲရှခြင်းမရှိသည့် နီလာဖန်သားဖြင့် ထုတ်လုပ်မည်
7/12/2014 02:05:00 PM IT-news
Apple ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ် မည့် iPhone6အား ၁၀၀ ရာခိုင် နှုန်းနီးပါး အကြမ်းခံနိုင်သည့်နီလာ ဖြင့် ပြုလုပ်မည်ဟု သိရသည်။
You Tube ပေါ်မှ ဗီဒီယိုတစ် ခုအရ iPhone6သည် ဓားဖြင့် ခုတ်လျှင်ပင် ကွဲကြေသွားမည်မဟုတ် ဘဲယင်းကို လိမ်ချိုး၍လည်း မရဟု သိရသည်။ ထို့အပြင် iPhone6သည်တစ်စုံတစ်ရာနှင့် ထိခိုက်မိလျှင် တောင်မှ အစင်းရာခြစ်ရာများလုံးဝ ပေါ်လာမည် မဟုတ်ဟု သိရသည်။
ထိုဗီဒီယိုဖိုင်အား You Tube ပေါ်တွင် နာမည်ကြီးဗီဒီယိုများ ဖန် တီးသူ မားကွတ်ဘရောင်းလီက လွှင့်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး Apple ကုမ္ပ ဏီ၏ အတွင်းလူတစ်ဦးထံမှရရှိလာ သော iPhone6တွင် အသုံးပြုမည့် မှန်အား နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့် စမ်းသပ် ပြခဲ့သည်။
ဘရောင်းလီ၏ အဆိုအရ ဖန် သားပြင်သည် စာရွက်တစ်ရွက်လောက် သာတူသည်ဟုလည်း သိရသည်။
iPhone6၏ ထောင်လိုက် အလျားသည် ၄ ဒသမ ရ လက်မရှိ သည်ဟုလည်း လီက ဆိုသည်။ အချို့သော သတင်းများအ ရ Apple ကုမ္ပဏီက နီလာဖန်သားပြင်နှင့် ဖုန်းအား လွန်ခဲ့သော နှစ်ကတည်းက စတင်တီထွင်နေသည်ဟု သိရသည်။
Apple ကုမ္ပဏီကလည်း အရီ ဇိုးနားတွင် နာမည်ကျော်သတ္တုတွင်း တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ပူး ပေါင်းကာ သတ္တုတွင်းတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရန် စီစဉ်နေ သည်ဟု ကြေညာထားသည်။
ယင်းကြောင့် Apple ၏သတ္တု တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်သ မား ၇၀၀ ခန့် ခန့်အပ်သွားနိုင်ပြီး ၎င်း တို့ကလာမည့် အနာဂတ်မျိုးဆက်၊ iphone များတွင် အသုံးပြုရန်နီလာ ဖန်သားပြင်များကို ထုတ်လုပ်ပေး မည်ဟုဆိုသည်။
Apple ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာရှင် တစ်ဦးကလည်း ရှယ်ယာရှင်အစည်း အဝေးတွင် Apple ကုမ္ပဏီသည် စက်ရုပ်အ လုပ်သမား များနှင့် ခေတ် ရှေ့ပြေးနည်းပညာများ အသုံးပြု သည့် ပထမဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာနိုင် သည်ဟုဆိုသည်။ သူ၏ ပြောစကား အရ
Apple ကုမ္ပဏီသည် iPhone6အပါအဝင် ၎င်းတို့အနာဂတ် ဖုန်းအသစ်များကို လူအစားစက်ရုပ် အလုပ်သမားများဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင် ဖွယ်ရှိနေသည်။
သို့သော် ဘရောင်းလီက သူ၏ ဗီဒီယိုတွင် Apple သည် i Phone6တွင် စက်ရုပ်နှင့် လူသားအလုပ်သ မားများ၏ ပေါင်းစပ်စွမ်းအား ကို အသုံးပြုကာ ထုတ်လုပ်သွားမည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် i Phone6ဟုဆိုကာ အင်တာနက်ပေါ်သို့ တင်ထားသည့် ဓာတ်ပုံအများအ ပြား ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသည်။
၎င်းတို့အားလုံးသည် ပါးလွှာ ပြီး အနက်ပေါ်တွင် အဖြူရောင်အစင်း ကြောင်းများ ပုံဖော်ထားသည့် မျဉ်း ကွေးပုံစံများပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဂျပန်သတင်းဌာန တစ်ခုက i Phone6သည် အင်တာနက်ပေါ်မှ ဓာတ်ပုံများ ကဲ့သို့ မဟုတ်ဟု ဆိုပြန်သည်။
Apple ကုမ္ပဏီသည် မကြာ သေးမီက ထုတ်လုပ်လိုက်သော၎င်း တို့၏ i Phone5S တွင် Home ခလုတ်နှင့် ကင်မရာမှန်ဘီလူးတို့ တွင် နီလာဖန်သားဖြင့် ဖန်တီးထား သည်ဟုလည်း သိရသည်။
7/11/2014 09:26:00 AM IT-news
7/10/2014 02:02:00 PM IT-news
ကျတော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ အသုံးများတဲ့ မေးလ် အနေနဲ့ ဂျီမေးလ်ကိုတွေ့ရသည့် နည်းတူစွာ အီးမေးလ် ဟတ်ခံရခြင်းနောက် ဘာတွေ
ပြန်လုပ်ဖို့ လိုသလဲဆိုတာ။ မြင်တွေ့နေရတဲ့ အတိုင်းပဲ Facebook အကောင့်တွေကိုလည်း ဂျီမေးလ်တွေနဲ့ အများဆုံး ၀င်ကြတာမို့
အကောင့်တစ်ခုကို ဆုံးရူံးတာနဲ့ နောက်တစ်ကောက်ကိုပါ ပါနိင်ပြီး လက်လွယ်စပယ် ဆုံးရူံးရတာဟာ ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်
ကောင်းတာကို မတွေ့ရတာမို့ ဟတ်ခံနေရတဲ့ အနေအထားမှာ ကျရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက် အတတ်နိင်ဆုံး ပြန်လည်
လုပ်ဆောင် ရယူနိင်မဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
အကောင့်ကို ပြန်လည် ရယူပါ။
တကယ်လို့ မိတ်ဆွေရဲ့ အကောင့်ကို ဟတ်ခံလိုက်ရပြီးဆိုရင် ဟတ်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ်ရဲ့ အချက်အလက်တွေလောက်ပဲ ရယူသွားမှာ ဖြစ်ပြီး အကောင့် Password ကိုတော့ အမြဲတမ်းတော့ ချိန်းသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ ပြန်လည် အကောင့်ကို ရယူဖို့ ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ "Forgot your password?" ဆိုတဲ့ နေရာကနေပဲ Password ကို reset ကျဖို့ နဲ့
အကောင့်ကို ပြန်ယူဖို့ သုံးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခါ လုံခြုံရေး မေးခွန်းတွေနဲ့ အီးမေးလ် လိပ်စာကို backup အနေဲ့ အသုံးပြုတဲ့ recover မေးလ်တွေကိုတော့ ပြန် ဖြေဖို့ ရှိပါတယ်။ အဲလိုမှာ ပြန်လုပ်လို့မရရင်တော့ အကောင့်ကို ပြန်ရဖို့ သိပ်မသေချာတော့ပါဘူး။
လွယ်ကူတဲ့ Passwords တွေ အသုံးပြုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ဒီအချက်ကတော့ လူတိုင်း သိပြီးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲလို လုပ်ထားပြီးသိတိုင်းအောင် စိတ်ထဲမှာ မကျေနပ်သေးရင် စာလုံးတွေ အများကြီးသုံးပြီး စာလုံးအကြီးတွေရော၊ စာလုံးအသေးတွေရော၊ သင်္ကေတတွေရော၊ စပေ့ဘားတောင် သုံးပြီး ထပ် ထည့်နိင်ပါသေးတယ်။
Setting ကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။
ဟတ်ကာတွေဟာ ကိုယ်ရဲ့ setting တစ်စုံတစ်ရာကို မပြောင်းလဲ နိင်စေဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်
နောက်တွင် ကိုယ်ရဲ့ အကောင့်ထဲကို သူတို့တွေဟာ လွယ်ကူစွာ ၀င်ရောက် ရရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ secondary (recovery) ကို တိကျအောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ forward စည်းမျဉ်းတွေကို သုံးထား မထားကိုလည်း စစ်ရပါဦးမယ်။ သို့မဟုတ်ရင်တော့ ကိုယ်ကို ပို့သမျှအီးမေးတွေဟာ သူတုိ့ဆီကို ရောက်ရှိပြီး ပါသွားနိင်ပါတယ်။
Active login ကို ဖယ်ရှားပါ။
မိတ်ဆွေရဲ့ အကောင့်ကို အခုလက်ရှိ ဘယ်က သုံးနေတယ် ( IP address ) ကို ကြည့်လို့ရတဲ့ Active login ဟာ mail.google.com ရဲ့ အကောင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ ညာဖက် အောက်ဆုံး မှာ ရှိပါတယ်။ Details လိုရေးထားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ နေရာကို ကလစ်ထောက်လိုက်တာနဲ့ သင့်ဝင်ထားသမျှ တည်နေရာတွေနဲ့ အချိန်တွေ၊ လက်ခံဝင်ရောက်တဲ့ ပုံစံ တွေကိုပါ တွေ့နိင်ပါမယ်။ထို ဇယားပေါ်ရှိ Sign out all other session ဆိုတာကို နှိပ်ပြီး ကိုယ် အကောင့်ကို တစ်ခြားနေရာမှ ၀င်ရောက်နေခြင်း မရှိစေဖို့ ဖယ်ရှားပစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ဟာ Password ချိန်းပြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့ ပြသနာ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ မေးလ်ဟာ ဟတ်ခံရပြီးဆိုရင် ကာကွယ်ခြင်း ဖြစ်စေဖို့ အကောင့်ကိ ၀င်ဖို့ Password ရိုက်ပြီး ၀င်ပြီးတာနဲ့ ကုဒ်က ဖုန်းကို ပို့တယ်။ ထိုမှ တစ်ဆင့် နောက်ထပ် ကုဒ် ထပ်ထည့်ပြီး ၀င်တဲ့ စနစ်တွေကို လည်း ထောက်ကူနိင်ပါတယ်။ ထို အတွက် ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ထားဖို့တော့ လိုပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဟတ်ကာတွေဟာ သင့်ရဲ့ ဖုန်းကို ရမှာပဲ ဟတ်နိင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား ဆိုဒ်တွေကို ကြည့်ပါ။
ကိုယ်ရဲ့ Password ကို အခြား ဆိုဒ်တစ်ခုမှာ ထပ်ပြီး မသုံးထားနိင်စေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Facebook လိုမျိုး ဆိုရှယ်ဆိုဒ်မှာ အီးမေးလ် အကောင့်ရဲ့ Password တစ်ခုတည်းကို သုံးထား ရင်တော့ ဟတ်ကာတွေဟာ သင့်ရဲ့ အီးမေးလ် Password ကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မော်လ်ဝဲလ် Scan တွေကို သုံးပါ။
ဟတ်ကာတွေဟာ မောလ်ဝဲတွေကိုသုံးကာ အီးမေးလ်ကို ဟတ်ဖို့ အသုံးပြုနိင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အတု အယောင် အီးမေးလ် ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးပြီး ဟတ်လာနိင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် Avast, Malwarebytes, နဲ့ BitDefender တို့လို ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်တဲ့ Scanner တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
အောင်ဟိန်း ( ရိုးရာလေး ) အပြည့်အစုံသို့ »
တွစ်တာ သိပ်သုံးလွန်းလေ အိမ်ထောင်ရေး ပြဿနာ ပိုများလေဟုဆို
7/09/2014 08:36:00 AM IT-news
၀ါရှင်တန်၊ ဇူလိုင် ၄
တွစ်တာ သိပ်သုံးသူများသည် အိမ်ထောင်ရေး၊ အချစ်ရေးမှာ ပြဿနာ ပိုကြုံရကြောင်း လေ့လာမှု စစ်တမ်းတစ်ရပ်က ဆိုသည်။
ယခင် စစ်တမ်းတစ်ရပ်ကလည်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် များများသုံးလေ အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေး ပြဿနာ ပိုတက်လေဟ ဖော်ပြခဲ့ပြန်ရာ ဆိုရှယ်မီဒီယာ အသုံးများလွန်းခြင်းသည် ဆက်ဆံရေးများကို ပျက်ယွင်းစေသလား မေးခွန်း ထုတ်စရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တွစ်တာ စစ်တမ်းကို ““ဆိုင်ဘာ စိတ်ပညာနှင့် အပြုအမူများ ဆိုင်ရာဂျာနယ်””တွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ မစ်ဇူရီတက္ကသိုလ်မှ ပါရဂူ ဘွဲ့သင်တန်းသား ရပ်ဆဲကလေတန်က သုတေသန ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သုတေသနအတွက် တွစ်တာသုံးသူ (၅၈၁) ဦးကို မေးမြန်းခဲ့သည်။ ထိုသူများ တွစ်တာသုံးနှုန်း၊ အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေး ပြဿနာ ကြုံတွေ့ရနှုန်းများကို စစ်တမ်းကောက်သည်။ ထိုအခါ တွစ်တာကို အချိန်ကြာကြာ သုံးသူဖြစ်လေ လင်မယား အဆင်မပြေ၊ အိမ်ထောင်ပျက်၊ အိမ်ထောင်ကွဲ စသည့် အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေးပိုင်း အဆင်မပြေမှုများ ပိုဖြစ်ပွားလေ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။
ဆိုရှယ် မီဒီယာများကို အသုံးလွန်ခြင်းကြောင့် လူမှုဘ၀ ထိခိုက်နိုင်ပုံကို ယခုစစ်တမ်းက စတင်မီးမောင်း ထိုးပြလိုက်ပြီ ဖြစ်ရာ ဆက်လက်ပြီး ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လေ့လာနိုင်အောင် အားထုတ်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ် ဘရန်ဒါဝိုက်ဒါဟိုးက မှတ်ချက် ပေးထားသည်။
Facebook ဟာ သင့်အတွက် အမှန်တကယ် အကျိုးရှိနေခြင်း အကြောင်းပြချက်များ
7/05/2014 08:50:00 AM IT-news
အခုချိန်မှာ Facebook ကိုဝေဖန်မယ်ဆိုရင် လူနှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိနိုင်ပါတယ်။ ပထမကတော့ အချိန်းဖြုန်းခြင်း အတွက် အကောင်းဆုံးအကြောင်းပြချက်ဆိုပြီး ပြောနိုင်တယ်။ ဒုတိယကတော့ Facebook ကို မုန်းနေရတဲ့ ခံစားချက်ကို နှစ်သက်နေလို့ပါပဲ။ နှစ်သစ်ကူးမှာ Facebook လုံးဝမသုံးတော့ဘူးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့အားလုံးက Facebook ကို တိတ်တဆိတ် သဘောကျနေကြတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် အကြောင်းပြချက်တွေ သိပ်မပေးပါနဲ့။ ဒီကွန်ယက်ဟာ ထောင်ချောက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုယ်ပိုင် အကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့ ဒီလူမူကွန်ယက်ကို အသုံးချရမယ့် နေရာကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပေါင်ချိန်ကျဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး လမ်းညွှန်ချက်တွေရနိုင်တာ လူမှုကွန်ယက်လောက် ဘယ်နေရာမှ မရှိပါဘူး။ Facebook မှာ ကိုယ်အလေးချိန် လျော့ကျစေတဲ့ အစီအစဉ် သီးသန့်ပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာကို သင် အချိတ်အဆက်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင် သင်ပိုပြီးတော့ အလေးချိန် သိသိသာသာလျော့ကျနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေး ပိုများပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ သင်လိုချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုလည်း အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ တဆင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းတွေ လုပ်လို့ရတယ်လေ။
၂။ အတွေးအခေါ်ပိုပြီး မြင့်တတ်လာတယ်။
ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရပေမယ့် လေ့လာတဲ့ ပညာရှင်တွေက အလုပ်သမားတစ်ဦး ၁၀မိနစ် အားလပ်ချိန်မှာ Facebook သုံးတဲ့သူဟာ ဘယ်လိုလူမှုကွန်ယက်နဲ့မှ ချိန်ဆက်ထားခြင်း မရှိတဲ့သူထက်တော့ ပိုပြီး တွေးခေါ်နိုင်တာကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ခေါင်းစားတဲ့ဂိမ်းတွေ မဆော့သရွှေ့တော့ Facebook က သင်နဲ့ အလုပ်ကြားမှာ အထောက်အကူအပြုဖို့ အဆင်သင့် စောင့်နေပါတယ်။
၃။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရှိစေတယ်။
ထူးဆန်းတဲ့နေရာ၊ အပန်းဖြေစရာနေရာတွေ အကြောင်းကို သင်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ မရောက်ဖူးပေမယ့် အကြောင်းသိထားတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်စိတ်ချမှု ပိုရှိတာပေါ့။ Facebook ကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်၇င် ကိုယ့်သူငယ်ချင်း သွားရောက်လည်ပတ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို သင်တွေ့လိုက်တာနဲ့ သင့်အနေနဲ့ ရောက်ချင်စိတ်လေးတွေ တိတ်တဆိတ်ရှိလာမှာပဲ။ သင့်အားလပ်ရက်ခရီးထွက်ဖို့ နေရာကို ခေါင်းစားခံပြီး ရွေးချယ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သင်နှစ်သက်တဲ့နေရာကို အတိအကျရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အကူအညီပေးတဲ့ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook က သင့်ကို ရူးသွပ်သွားအောင် ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူးဆိုတာတော့ သင်ယုံကြည်ဖို့ လိုပါတယ်။ သုတေသနပြုလုပ်ချက်အရ Facebook အသုံးပြုတဲ့ လူကြီးတွေဟာ မှတ်ညဏ် ၂၅ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာတာကို တွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကတော့ သင်ရဲ့ Facebook Profile ကို Update လုပ်တဲ့အချိန်မှာ သင့်ဦးနှောက်က တချိန်တည်းမှာပဲ အချက်အလက်အများကြီး စနစ်တကျ လုပ်ဆောင်ပေးနေတာကို သင်သတိထားမိကောင်း ထားမိပါလိမ့်မယ်။
၅။ လတ်တလောသတင်းတွေကို အမြဲသိရှိနိုင်တယ်။
Facebook ကို အချိန်များများပေးနိုင်လေ သင် သတင်းစာကို ကောက်ယူဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင် သာမက ကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိနေတဲ့ ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေအကုန် Facebook မှာ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ဖတ်လို့ရနေပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် လူမူကွန်ယက်ကနေ သတင်းအစုံအလင် ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှ ငြင်းလို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။
7/03/2014 09:03:00 AM IT-news
“ လဲသေလိုက် လေ။ အဲဒီလို သောက်သုံးမကျတဲ့လူတစ်ယောက် အကြောင်း ကို ဘာများ အထွေအထူး ဆွေးနွေးနေရမှာလဲ .. ” လို့
စတိဗ် ဂျော့ဘ် က အင်တာဗျူး တခု မှာ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း ပြောခဲ့ဖူးတယ် ဆိုရင် …
အဲဒီလို အချိန်မျိုးမှာ အဲဒီ အကြောင်း ကို ကျွန်တော် အရင်ဆုံး ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်မှာ တော်တော့်ကို ကျွတ်သွားတယ်။ အမှန်ပါပဲ ..။
အဲဒီ စကားကို ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ business insider မဂ္ဂဇင်း တခု ထည့်သွင်းခဲ့တာပါ.။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်တိုရဲ့ ချစ်လှစွာသော စတိဗ်ဂျော့ဘ် က ပြောခဲ့ပါတယ်။
“ အဲဒီကောင် က .. ၀ မရှိပဲ ၀ိ လုပ်နေတဲ့ကောင် “ (မူရင်းမှာတော့ .. big arrogant လို့ သုံးပါတယ်။)
ဒါပေမဲ့ စီမံကိန်း တော်တော်များများ ဟာ Apple ရဲ့ Secret Projects တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေလေ့ရှိပါတယ်။ အခု ၂၀၁၄ ခုနှစ် မှာ မော်တော်ကားတွေပေါ်မှာ သုံးစွဲမဲ့ နည်းပညာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Apple နဲ့ Google Android တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့စရာ အကြောင်း ရှိနေပါတယ်။
မီးစာကုန်၊ ဆီခမ်းတဲ့အချိန် … စတိဗ် ဂျော့ဘ် သေခါနီးအထိ စစ်ကြေငြာခဲ့တယ် လို့ ပြောလာခဲ့မယ် ဆိုရင် …
7/02/2014 08:18:00 PM IT-news world-news
7/02/2014 08:16:00 PM IT-news mobile-phone-news
ကျွန်တော် အသုံးပြုနေတာကတော့ New iPad ကိုအသုံးပြုနေတာပါ။ ကျွန်တော့် iPad မှာအစက iPad ကိုလက်ငါးချောင်းနဲ့ ဆွဲလိုက်ရင် အသုံးပြုနေတဲ့ App စနစ်တွေပိတ်သွားတာတို့ အောက်ကနေ လက်ငါးချောင်းနဲ့ ဆွဲတင်လိုက်ရင် အသုံးပြုပြီးသားစနစ်တွေ ပေါ်လာပြီးဖျက်လို့ရတဲ့ စနစ်မျိုးတွေကို အသုံးပြုလို့ရနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခုအဲဒီစနစ်တွေ တစ်ခုမှအသုံးပြုလို့ မရတော့ပါဘူး။ Home Key ကိုနှိပ်မှပဲ အသုံးပြုနေတဲ့ စနစ်ကိုပိတ်လို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့အသုံးပြုပြီးသား App တွေကိုလည်းပြန်ရှာလို့ မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲခင်ဗျာ။
ဒါကတော့ iPad မှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Gesture Sensor စနစ် ပိတ်သွားလို့ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပျက်သွားလို့ ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ iPad ထဲမှာရှိနေတဲ့ Setting ထဲကိုသွားလိုက်ပါ။ Setting ထဲမှာ General ဆိုတဲ့ထဲကို ဝင်လိုက်ပါ။ General ထဲမှာ Multitasking Gesture ဆို တဲ့စနစ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီစနစ်နေရာ မှာ On ဖြစ်နေသလား Off ဖြစ်နေ သလားဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ပါ။ Off ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ On လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ Multitasking Gesture ဆိုတဲ့နေရာမှာ On ဖြစ်နေပြီး Multi Touch စနစ်တွေက အသုံးပြုလို့မရတာ ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး Touch Screen ကိုစစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ်။ Touch Screen က Multitouch စနစ်ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Gesture Sensor စနစ်တွေမကောင်းတော့ တာဆိုရင်တော့ ဒါက Hardware ပိုင်းက ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်တာမျိုး ဒါမှမဟုတ် OS က Multitasking စနစ်ကိုအထောက်အပံ့ မပေးနိုင်တော့တာမျိုး ဖြစ်ခဲ့တာဆိုရင်လည်း OS ကိုအသစ်ပြန်လည် တင်တာမျိုးတွေပြုလုပ်မှပဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပထမဆုံးတော့ Setting ထဲမှာသွားပြီးတော့ Multitasking Gesture စနစ်ကိုအရင် ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပါ။
7/01/2014 09:54:00 AM IT-news
6/29/2014 01:21:00 PM IT-news strange-news
အောင်ဟိန်း ( ရိုးရာလေး) အပြည့်အစုံသို့ »
6/29/2014 01:21:00 PM IT-news strange-news world-news